को हुन् यी महिला, क्यान्सरको अप्रेसन पछि निप्पलमा ट्याटु खोप्ने – Khabartime
को हुन् यी महिला, क्यान्सरको अप्रेसन पछि निप्पलमा ट्याटु खोप्ने
१७ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १४:१७ 196 पटक हेरिएको
फाल्गुन १७ – म २८ बर्षकी थिएँ, जब मलाई बताइयो कि मलाई स्तन क्यान्सर हुने आशंका ९५ प्रतिशत छ । यस रोगले मेरो हजुरआमा र उनको आमाको पनि ज्यान लिएको थियो ।
मेरी आमाको मृत्यु पनि यही रोगले भयो । तीन बर्षअघि रगत परीक्षणमा थाहा भयो कि, ममा बीआरसीए-१ जीन छ ।
मैले यो आफ्नी आमाबाट विरासतमा मिलेको थियो, जसको कारण औसत एक महिलामा स्तन क्यान्सरको आशंका १२ देखि ७२ प्रतिशत बढ्छ ।
उनी स्वंम अपराधबोध गर्थिन् । रुने गर्थिन् । माफी माग्थिन् । म स्वंमलाई सम्हाल्नमा ध्यान दिन्थे । र, ध्यान दिन्थे कि, डरले नै मलाई पूर्ण रुपले नखाओस् ।
तर, मेरो दिमागमा पहिला कुनै शंका थिएन । म शल्यक्रियाबाट दुबै स्तन निकाल्न चाहन्थें । किनभने म मृत्युको खतरा उठाउन सक्दिनथें ।
म आफ्ना बच्चा, आफ्ना पार्टनर, आफ्ना परिवारका लागि जिउन चाहन्थें । आफ्नो लागि जिउन चाहन्थें । शल्यक्रियाबाट मेरो दुबै स्तन र निप्पल निकालियो ।
म विस्तारै अस्पतालको शौचालयमा गएँ । ऐनाको अगाडि उभिएँ । आँखा बन्द गरें । मेरो हात काँपिरहेको थियो । मैले आफ्नो गाउन हटाएँ ।
मैले मेरो स्तन निकाल्नुअघि घण्टौसम्म दोस्रो पटक बनाइने स्तनको केहि तस्विर हेरेकी थिएँ ।
म यसलाई झेल्न सक्थें । तर, म त्यहाँ हेरिरहेकी थिएँ, जहाँ मेरो निप्पल थियो । मलाई थाहा छैन कि म त्यो सानो शौचालयमा कति समय उभिएँ ? वास्तवमा म आफ्नो नयाँ स्तनलाई स्विकार गर्न कोशिस गरिरहेकी थिएँ ।
रुनुको मसँग बिकल्प थिएन । यस्तो लाग्थ्यो कि, म अधुरो हुँ । जस्तो कि, म आफ्नो शरीरलाई देख्न पाउँन्न ।
मेरो पेटमा संक्रमण थियो । मैले निकै गाह्रोगरी आफ्नो शरीरलाई रिकभरको लागि तयार राखेकी थिएँ । त्यस कुरामा भने मेरो चित्त बुझ्दैनथ्यो, कि मेरो निप्पल थिएन । निप्पल बिना मेरो स्तन कस्तो देखिदो हो ?
त्यसले मलाई पक्कै उदास बनाउनेछ । म आत्माविश्वासका साथ रहें । तर मैले ऐना वा अर्काको अगाडि कपडा बदल्न बन्द गरें ।
ट्याटु आर्टिस्टले यस्तो निप्पल बनाइदिएका थिए, जो असली जस्तै देखिन्थ्यो । मानौं, त्यो मेरो नै हिस्सा हो ।
हुन त यो ट्याटु थियो । केवल ट्याटु । तर, यसले मेरो जीवनमा आत्माविश्वास फर्काइदियो । अब म आफ्नो कपडा आफ्ना पार्टनरका अगाडि खोल्न सक्थें । म आफ्नो शरीरलाई गर्वसाथ देखाउन सक्थें ।
नेपालमा २९ नयाँ औषधि
व्यायाम तथा योगा गर्न
पाठेघरको संक्रमणबाट बच्नको लागि
मैले हत्केलामा राखेर खैनी
बिहेकाे ६ महिनामै विधवा,